Melamine Block Joint Ny plywood dia karazana fototra vita amin'ny plywood efa nampiasaina, rehefa avy nanatevin-daharana ny sakana plywood, dia hametahana sosona fanampiny amin'ny veneer vaovao amin'ny lafiny roa amin'ny sakana.Noho izany ny taratasy melamine amin'ny lafiny roa dia ara-toekarena sy azo ampiharina amin'ny haingon-trano sy fanaka.Fampisehoana sy toetra:
1, tsy misy deformation, tsy mivaky, mitafy, fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny rano.
2, hery manenjana tsara, azo ampiasaina imbetsaka.
3, fiarovana ny tontolo iainana E1 fenitra.
4, avo lenta, maro loko, isan-karazany.
5, tsy misy loko, mora kokoa ny tontolo iainana
Anaran'ny vokatra plywood miaraka amin'ny melamine ho an'ny haingo sy fanaka
Fitaovana ambonin'ny tany Taratasy melamine / sns araka ny fangatahana
Haavo (mm) 5-25mm
loko White, volontany, mainty, volondavenona na araka ny takian'ny mpanjifa
Voa hazo/loko madio/modely manokana/sary sokitra/araka ny fangatahana
Hatrany 40GP 16 pallets/42M³
Fampiasana Haingo anatiny/Furniture sns.
Ny plywood melamine dia vita amin'ny solaitrabe tokana sy lakaoly tontolo iainana, misy sticker ivelany.Ny fanaraha-maso henjana amin'ny fanodinana manara-penitra dia mahatonga ny sisiny ho tsara tarehy, tsy dia mora mianjera.Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanaka sy kabinetra.
1. Ny henjana tonga lafatra, fisaka sy malefaka ny solaitrabe dia miantoka ny vokatra farany matanjaka, miorina tsara ary tsara tarehy.
2. Noho ny fahamarinan-toeran'ny refy amin'ny biraontsika, dia mijanona ho fisaka sy tsy miovaova amin'ny toetr'andro samihafa ny vokatra.
3. Ny fisaka ny biraontsika, miaraka amin'ny calipers tsy tapaka sy ny habeny, dia miantoka ny fandehanana tsara amin'ny milina fanodinana.
4. Ny ambonin'ny solaitrabe dia manana ny fahafahana hisakana ny fiasan'ireny mba hamela haingana sy ara-toekarena gluing.
5. Ny biraonay dia mora ny rotary cut, die cut, punch, crease, score, drill and rout.
teo aloha: Melamine Laminate Plywood ho an'ny fanaka
Manaraka: vidiny mora kokoa Finger Joint Core sarimihetsika miatrika plywood
Laminated plywood ho an'ny kabinetra
Vidin'ny takelaka plywood voalamina
Plywood misy melamine
Fanaka plywood maoderina